Nhau - Asiaprint inobata iyo pfungwa ne "Sevice nyaya zvakanyanya"
Asiaprint inobata iyo pfungwa ne "Sevice nyaya zvakanyanya"
Nhasi isu takatumira kunze aya maviri roller kupisa muchina wemuchina kuVietnam. Roller kupisa yekuchinjisa michina odha izere nemwedzi miviri iyi uye nokutendeseka kunonoka mamwe maodha uye kukonzera zvisingaenderane nemutengi. Yako inotevera kuraira, ndokumbira utore munguva pfupi kuti ubate iyo nguva yaunoda!
Hakusi kuwedzeredza kutaura kuti vashandi vedu vanga vachishanda maawa gumi nematanhatu pazuva kubva Kukadzi gore rino kubata mukuburitsa nguva kunyangwe zviitiko zvakawanda zvichienda zvinopesana. Neraki, isu tinowana vatengi vedu kutsigirwa uye kunzwisisa. Tinotenda nazvo. Uye kunze kwaizvozvo, vedu vese vashandi vanozove nezororo mushure menguva iyi yakabatikana.
1-MAY kusvika 5-MAY 2021 richava Zuva reVashandi, isu tichazotangazve basa kubva 6-Chivabvu. Nekudaro, ivo vashandi vanogadzira michina vanongova nemazuva maviri chete kubva kubasa.
Tinovimba tichazotumira muchina munguva nemwedzi unouya.
Post nguva: Kubvumbi-22-2021